Bit By Bit - Ukuqwalasela ukuziphatha - 2.3.1.3 Non-lovukelo
Komlinganiselo kufane ukutshintsha yokuziphatha imithombo yedatha enkulu.
Omnye umngeni uphando lwentlalo kukuba abantu batshintshe indlela yokuziphatha kwabo xa besazi ukuba athi aqatshelwe ngabaphandi. Ntle kubiza ngokubanzi olu tshintsho ukuziphatha njengempendulo Umphandi womlinganiselo reactivity (Webb et al. 1966) . Omnye umba data enkulu ukuba abaninzi umphandi ukufumana iyathembisa ukuba nxaxheba jikelele Aniqondi na ukuba idatha yabo ezenziwa okanye sakuqhela enjenje kweli nokuqokelelwa kwedata ukuba kuphinda etshintsha yabo. Ngenxa yokuba non-lovukelo, ngoko ke, imithombo emininzi data ezinkulu ingasetyenziswa ukufunda ukuziphatha ukuba akubanga amendable ngokomlinganiselo oluchanileyo ngaphambili. Umzekelo, Stephens-Davidowitz (2014) basebenzisa ukuxhaphaka phantsi lucalu imibuzo enjini yokukhangela ukulinganisa animus ngokobuhlanga kwiingingqi ezahlukeneyo eUnited States. I-non-lovukelo enkulu (jonga icandelo edlulileyo) uhlobo data uphendlo imilinganiselo ukuba kwakuza kuba nzima ngokusebenzisa ezinye iindlela, ezifana nophando yenziwe.
Non-reactivity, nangona kunjalo, oku kuqinisekisa ukuba ezi iinkcukacha ingadliwa ngqo zibonakalisa zokuziphatha okanye izimo zabantu. Ngokomzekelo, njengoko ebemnye waxelela Newman et al. (2011) , "Yinto ukuba mna awunalo iingxaki, mna nje Andibeki phezu Facebook." Ngamanye amazwi, nangona abanye oovimba bedatha enkulu azikho lovukelo, azisoloko simahla ukunqweneleka icala lwentlalo , umkhuba abantu ukuba ufuna ukuziveza ngeyona ndlela. Ngaphezu koko, njengoko ndiza ukuchaza ngaphezulu ngezantsi, ezi imithombo yedatha wambi kwachatshazelwa iinjongo abanini eqongeni, ingxaki neyokuqungaqunga algorithmic (echazwe nangakumbi ngezantsi apha).
Nangona non-reactivity kusilungele, uphando, umlando ukuziphatha abantu ngaphandle kwemvume yabo ulwazi kuphakamisa neenkxalabo yokuziphatha kuxoxwa ngezantsi kwaye iinkcukacha kwiSahluko 6. intsilelo nxamnye zohlolo ezandileyo yedijithali kungakhokelela iinkqubo data enkulu ukuba yovukelo kakhulu ekuhambeni kwexesha, kwaye womelele inkxalabo malunga yokucupha yedijithali yayikwazi abanye abantu ukuba izame ukuphuma kweenkqubo data enkulu ngokupheleleyo, ukwandisa iinkxalabo malunga nabangeyo-lokumelwa (zichazwe ngezantsi ngaphezulu).
Ezi kwiipropati ezintathu ezilungileyo data zinkulu zentlalo uphando-enkulu, usoloko-kwi, kwaye non-lovukelo-jikelele kuvela ngenxa yokuba imithombo yedatha azizange zidalwe abaphandi uphando. Ngoku, ndiza ndibheke iipropati ezisixhenxe imithombo yedatha enkulu ezingalunganga uphando. Ezi mpawu nabo badla kuvela kuba le data ayidalwanga abaphandi uphando.